Venezoeliàna miisa 34.000 atosiky ny valanaretina hifindra monina ao amin’ny taniny ihany · Global Voices teny Malagasy
Tsy niomana tamin'ny fandraisana ireo mpiverina an-tanindrazana i Venezoelà
Voadika ny 24 Mey 2020 7:13 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, English, Português, Ελληνικά, русский, Español
Pikantsary avy amin'ny lahatsary Euronews, nivoaka tamin'ny 13 Aprily 2020.
Mamakivaky lalankely, anaty fiara fitaterana iraisana, na kamiao mpitatitra entana, an'aliny maro ireo Venezoeliàna any an-tsesitany no miezaka miverina mody any Venezoelà. Lazain'ireo mpifindra monina ireo fa noho ny tsy fisian'ny asa, ny tsy fahavitàn'izy ireo mandoa hofantrano isanandro ary ny mba ho tafavoaka velona amin'ilay krizy ateraky ny COVID-19 no niteraka izao fiverenana faobe izao avy any amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina toa an'i Pero, Ekoatora ary Kôlômbia.
Lazain'ny gazety kôlômbiàna El Tiempo, fa 500 isanandro ireo mpifindra monina tonga ao Cúcuta , tanàna iray an-tsisintany, mihevitra ny hody any Venezoelà. Tamin'ny 15 Aprily, 34.000 no fitambaran'ireo olona nandingana ny sisintany nandalo tao amin'ilay tanàna.
Tena miavaka ity fiverenana faobe ity satria efa ho 5 tapitrisa ireo Venezoeliàna nandeha nila ravinahitra tato anatin'ny efatra taona farany noho ny fitontongan'ny toekarena, ny sondrobidim-piainana, olan'ny tolotra fandraisana an-tànana ny fahasalamàna ary ny tsy fisian'ny asa tao Venezoelà.
Volana iray lasa izay, nasehon'ny tarehimarika ofisialy fa Venezoeliàna mihoatra ny 1,8 tapitrisa no nonina tao Kôlômbia, raha ny governemanta tao Pero sy Ekoatora indray naminavina ny an'ny firenen'izy ireo tsirairay ho Venezoeliàna 800.000 sy 400.000. Araka ny lazain'ny Sampan'ny Firenena Mikambana misahana ny Mpitsoaponenana (UNHCR), an'aliny maro ireo Venezoeliàna any amin'ireo firenena ireo no tsy manana taratasy ara-dalàna, ka mahatonga azy ireo ho marefo sy mora iharan'ny fanararaotana eo amin'ny sehatry ny asa, ny fanararaotana ara-nofo ary ny fankahalàna vahiny.
Ny toedraharaha tsizarizary iainan'ireo Venezoeliàna any ivelany dia vao mainka niharatsy niaraka tamin'ny fisian'ireo fepetra fihibohana noraisin'ireo governemanta mba hiadiana amin'ilay valanaretina ao Kôlômbia, Ekoatora, ary Pero. Ny fikatonan'ny fandraharahàna sy ny fihibohana tsy maintsy arahana dia nisy fiantraikany mafy tamin'ireo Venezoeliàna mpila ravnahitra, satria ny ankamaroan'izy ireny dia mitady izay ho arapany isanandro amin'ny alàlan'ny fandraharahàna ivelan-drafitra
‘Maniry ny hody an-tanindrazana izahay’
Na eo aza ny fanakatonana sisintany noho ny didin'ny governemanta kôlômbiàna, an-jatony maro ireo Venezoeliàna ao Ekoatora no mivangongo ao ami'ilay tetezana ao an-tsisintany iraisan'i Ekoatora sy Kôlômbia mba hangataka alàlana handalo an'i Kôlômbia sy hanohy ny diany mirefy 1.800 km mankany avaratra mamonjy ny sisintany iraisany amin'i Venezoelà.
Rumichaca. sisintany iraisan'i Ekoatora sy Kôlômbia. “Maniry ny hody an-tanindrazana izahay”, hoy ireo Venezoeliàna mihiaka.
Mandritra izany, any amin'ireo faritra an-tsisintany iraisan'i Venezoelà sy Kôlombia, nasian'ny governemanta kôlombiàna lalantsara noho ny mahaolona, saingy narahana fepetra fitsirihana ny fahasalamàna mba hanamoràna ny fiverenan'ireo mpila ravinahitra ho any amin'ny firenena niavian-dry zareo.
Ben'ny tanàna ao Cali (Kôlômbia), @JorgelvanOspina, nitatitra fa napetraka ny lalantsara noho ny maha-olona mba hitaterana ireo an-jatony mpila ravinahitra avy any Ekoatora ho any Venezoelà.
“Miainga mandao ny sisintany amin'izao fotoana izao ny fiarabe iray voalohany feno teratany Venezoeliàna “
Na nanolotra fiarabe fitaterana sy kamiao mba hitaterana ireo Venezoeliàna ho any amin'ireo tanàna kôlombiàna an-tsisintany ao Cúcuta sy Arauca aza ny manampahefana sasany any amin'ny faritra, miatrika olana amin'ny fitaterana ny ankamaroan'ireo mpifindra monina miezaka ny hiverina an-tanindrazana. Araka izany dia nandray ny safidy hanohy ny fifindramoniny an-tongotra izy ireo, na manakana izay tsara sitrapo eny an-dàlany eny.
#6Abr #Táchira #Frontera Andianà Venezoeliàna mifindra monina manohy mamakivaky ireo trochas [lalankely fiampitàna tsy ara-dalàna] mba hahatongavana any amin'ny sisintany sy avy eo indray hankanesana any amin'ny toby fandraisana fiara fitaterana ao San Antonio.
Tatitr'i Jonathan Maldonado (@ponchogocho) – @lanacionweb
An-jatony amin'izao fotoana izao ireo fianakaviana mpifindra monina no tafahitsoka any amin'ny antsasaky ny dian-dry zareo. Ao Bucaramanga, tanàna iray 200 km miala ny sisintany, hita mipetraka miaraka amin'ny entan-kelin-dry zareo ao amin'ny Parque del Agua (sahan-drano) miandry fitaterana ho any Venezoelà. Nanakarama fiara mpitatitra ny governemanta ao an-toerana mba hanisahana ireo mpifindra monina sy hisorohana, araka ny teny nampiasain'ny governoran'i fari-piadidian'i Santander, ny mety hianahan'ilay viriosy ao amin'ny faritra.
Misy toedraharaha vitsivitsy ahafantaran'ireo mpifindra monina fa tsy afaka ny hiditra ry zareo nefa koa tsy ananan-dry zareo intsony izay ho enti-manana mba hijanonana eo an-toerana. Toy izany ny tranga manjo an'i Eduardo José Rondón sy ny vadiny, tonga toa Kôlômbia efatra volana lasa izay, nandeha an-togontra avy any Puerto Orzar, any atsinanan'i Venezoelà. Nipetraka tao Bucaramanga izy ireo, tanàna iray manakaiky ny sisintany, fitadiavany fivelomana isanandro teo amin'ny toerana iray fametrahana fiara (parking).
Nambaran'i Eduardo Rondón tamin'ny Global Voices fa tsy afaka hiverina any Venezoelà izy satria mitondra vohoka ny vadiny ary afaka andro vitsy no tokony hiteraka.
“Nanome toky ny hikarakara an-dramatoa ry zareo ao amin'ny hôpitaly [ao Bucaramanga]”, hoy i Rondón tamin'ny Global Voices, nampiany hoe maniry ny hijanona ao Kôlômbia ny vadiny mba ho aminà toerana iray heveriny fa azo antoka no ho teraka ny zanany.
Na izany aza, eo aminà sampanandàlana iray ry zareo: “ho esorin-dry zareo ao amin'ny trano izahay satria efa andro maro no nipetraka tao tsy nandoa hofantrano. Nefa tsy misy ny vola, na ho an'ny sakafo aza! Tsy haiko hoe inona no ho ataonay.”
Venezoelà, tsy niomana ho amin'ilay fandraisana
Tamin'ny Aogositra 2018 ny governemanta ao Venezoelà no nanomboka ny “Drafitra Fiverenana an-Tanindrazana”. Izy io dia nofaritana ho toy ny tetikady diplaomatika sy ara-toekarena ho entina manamora ny fampodiana ireo teratany Venezoeliàna tra-pahasihranana ara-bola ka maniry ny hiverina an-tsitrapo any amin'ny fireneny. Tao anatin'io drafitra io, fianakaviana an-jatony maro no niverina tamin'ny alàlan'ny sidina na fiara fitaterana avy any amin'ireo firenena samihafa, isan'ireny Brezila sy ny Repoblika Dôminikàna.
Kanefa, ireo mpifindra monina nahavita nandingana ny sisintany iraisan'i Kôlômbia sy Venezoelà tamin'ny alàlan'ireo lalankely fiampitàna tsy ara-dalàna na ny fiara fitatarena dia niatrika fandraisana henjakenjana ihany, araka ny hita ao amin'ny media sôsialy, ao amin'ilay tanàna venezoeliàna ao San Antonio. Faritan'ilay mpanoratra sy mpanolotsaina politika, Gustavo Azócar, ho toy ny “fifanjevoana” ilay izy:
San Antonio del Táchira: an-jatony ireo Venezoeliàna niverina avy any Ekoatora sy Kôlômbia no mitohy tonga ao amin'ny toby fiantsonana, mahatototra tanteraka ny fahafahan'ireo manampahefana handray azy ireo. Tena fifanjevoana tanteraka.
- Gustavo Azócar A (@GustavoAzocarA) 9 Aprily 2020
Araka ny media ofisaly, miditra amin'ny fanaovana fitsirihana ara-pahasalamàna ireo manampahefana ao Venezoelà no sady mamindra ireo tafody ho any aminà toeram-ponenana vonjimaika mba hamitan-dry zareo ireny ny roa herinandro fihibohana. Nefa nisy ireo fitarainana noho ny olan'ny fotodrafitrasa sy ny famatsiana sakafo ho an'ireo mpifindramonina efa tafody ireo, izay ho an'ny tranga sasantsasany, mahatsapa fa atao tsinontsinona ao anatin'ireo fepetra fihibohana.
Ireny toedraharaha atrehan'ireo Venezoeliàna mpifindra monina niverina avy any #Ecuador / #Colombia ireny dia manitsakitsaka ireo fepetra taridàlana napetraky ny WHO/PAHO (OMS/OPS) ho an'ny fihibohana vokatry ny #COVIDー19
- Ronald Zir Lara (@RonaldZirLara) 6 aprily 2020
Ao Kôlômbia, taorian'ny kiana nivaivay momba ny tsy fisian'ny fandrindràna eo amin'ny sehatra nasiônaly sy ny tsy fahaiza-mitarika mba ho entina manohana ireo Venezoeliàna mpifindra monina mandritra ny valanaretina, nanambara ny filoha Iván Duque fa hotohizan'ny governemantany ny hanohana ireo olona mpifindra monina mipetraka ao Kôlômbia, indrindra fa ireo tena marefo. Nangataka faharetana izy mandritra ny fizaràna ireo fanampiana noho ny maha-olona. Nomelohiny ihany koa ireo fanavakavahana sy fankahalàna vahiny atao an'ireo Venezoeliàna mpila ravinahitra: “Mila ny tsara indrindra amin'ny firaisankinantsika Kôlômbiàna izy ireo.”